umshini wokukhulisa isigaxa somshini wokubhula okusanhlamvu,ukolweni,paddy
Lapho ukolweni,ibhali, umunyu,paddy irayisi noma ezinye okusanhlamvu kuvunwa, okusanhlamvu kufanele kwehlukaniswe nakho konke okunye ngaphambi kwesitshalo ngaphambi kokuba kusetshenziselwe ukwenza ufulawa. Le nqubo yokuhlukanisa ibizwa ngokuthi ukubhula. Kwezolimo kwanamuhla, ukubhula kwenziwa ngemishini ebizwa ngokuthi i- thresher umshini.umshini wepulazi weVictor usuqhamuke nemikhiqizo eminingi emihle yezolimo ngemuva kweminyaka yokuhlangenwe nakho emkhakheni wemishini yezolimo.grain thresher mashine isetshenziselwa kakhulu ukubhula ukolweni, irayisi, umunyu, ibhali, amabele, njll. umshini wokugaya i-sorghum uyasebenza futhi ungabhula kahle irayisi nekolweni ngokuphelele. umshini we-sorghum thresher unezici zesakhiwo esihlanganisiwe,ukwakheka okuhle nokusebenza okuthembekile, ukukhiqiza okuphezulu,ukusebenza okuhle kokubhula kanye nokulahleka okumbalwa kokusanhlamvu njll., umshini wokukhiqiza irayisi yokusanhlamvu kungenye yemikhiqizo yethu edumile ngobuchwepheshe ovuthiwe. okusanhlamvu okusanhlamvu kungumsizi omuhle wabalimi.Sinolunye uhlobo lwayo isifiji sokusebenza okusanhlamvu kuhle ekukhetheni kwakho!
Umshini wokusanhlamvu wamabele, isikrini concave, isigubhu, ikhava, fan omkhulu, owesibili fan fan, imoto noma udizili, isikrini sokudlidliza, ithuluzi eliqhutshwa yisisekelo nokunye. Ipulatifomu yokusebenza eqinile ikwenza ukuthi iphephe futhi ihlale isikhathi eside.
Izici zomshini we-sorghum thresher
1.Ukusebenza Kakhulu: Lo mshini wokusanhlamvu wamabele usuhlanganile ngokusebenzisana nokwanda okuhlukile ukuze okusanhlamvu, ukolweni bran, utshani kakolweni buzohlukaniswa futhi busulwe ngasikhathi sinye. Kungabhula izilimo ezahlukahlukene ngokusebenza kahle, hlukanisa ama-husks bese ususa uthuli kumxube wokukhiqiza. umthamo walo mshini wokubhula okusanhlamvu ungafinyelela ku-2000 ~ 2200kg / h.
2.Ikhwalithi Ethembekile: umshini wethu we-sorghum thresher uqokonyiswa ngesakhiwo se-compact, ukusebenza okulula, ukulungiswa okulula,umklamo wesayensi nekhwalithi ephezulu. Ngaphandle kwalokho, yi-anti-acid, anti-ukugqwala, nomswakama kufakazelwe. Izabelo zisezingeni elifanele, Inkomba ngayinye ifinyelele ekucacisweni kwezwe.
3.Ukonga izindleko: Umshini wokubhula we-sorghum unezinzuzo zesilinganiso sokususa okuphezulu kanye nokuqhekeka okuphansi, enciphisa ukuvuna futhi ibuye inciphise ukulahleka kwangemva kokuvuna futhi igcine izindleko zabasebenzi ngasikhathi sinye.
4.Ukuphepha Okuphezulu: Ukulawulwa kwezimoto kufakwe ngaphezulu kwesamanje, ukugcwala ngokweqile nokuvikelwa kwesifunda okufushane.
5.Amandla atholakala kabanzi, njengemoto, injini yedizili,ngakho lo mshini wokubhula okusanhlamvu uyathandwa e-Afrika ,ikakhulukazi indawo yokushoda kwamandla.
Uyemukelwa ukuthenga kwakho.
Amapharamitha wezobuchwepheshe womshini wokubhula okusanhlamvu
15hp injini yedizili